Ixabiso elongeziweyo | Ezezimali
Encarni Arcoya | 13/10/2021 21:01 | Ukuhlaziywa ukuba 13/10/2021 21:13 | Uqoqosho ngokubanzi
Wakhe weva ixabiso elongeziweyo Ngaba kulungile, yimveliso, yinkampani, yinkonzo? Ngaba uyazi ukuba eli gama libandakanya ntoni? Yikholwe okanye ungakholelwa, yinto ebalulekileyo. Kwaye kakhulu.
Ukuba ufuna ukwazi umxholo othile weli xesha, ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayifumana njani kwiinkampani, iimveliso, iinkonzo ... kunye nendlela yokuphucula, ke unazo zonke izitshixo ofuna ukuzazi.
1 Yintoni eyongeziweyo ngexabiso
1.1 Ixabiso elongeziweyo lenkampani
1.2 Ixabiso elongeziweyo lomntu
2 Ungayifumana njani kwiinkampani
3 Ungayiphucula njani
4 Izinto zexabiso
Yintoni eyongeziweyo ngexabiso
Singalichaza ixabiso elongeziweyo "njengexabiso elongezelelekileyo lezoqoqosho". Kwaye kunjalo ukwanda kwexabiso elihlawulelwe into elungileyo okanye inkonzo kuba iyatshintsha.
Umzekelo, cinga ukuba uthenga unodoli. Oku kubiza i-euro ezili-10. Nangona kunjalo, uthatha isigqibo sokutyala ii-euro ezingama-5 ngaphezulu ngokubeka umsebenzi obutofotofo, kunye neerhinestones, jewelry ... Oko kukuthi, unodoli uya kubiza i-euro ezingama-15 ukuba ufuna ukuyithengisa ukuze ubuyise imali yakho kunye neendleko zodoli. Kodwa kuvela ukuba uyithengisa nge-euro ezingama-55. Ukuba sithatha iindleko, i-55-15 ye-euro siya kuba nee-euro ezingama-40. Elo iya kuba lixabiso elongeziweyo, into ezuzwa ngakumbi xa iindleko esizenzileyo ukuyiguqula ikhutshiwe.
Ngamanye amagama, yinto 'eyongezelelekileyo' evumela ukuba inyuse amaxabiso aloo nto okanye inkonzo kuba yenze inguqu kwaye inikwe ixabiso elingaphezulu.
Ngaloo ngqiqo, nganye elungileyo okanye inkonzo inokuba nexabiso eliphantsi, eliphakathi okanye eliphezulu elongeziweyo. Umzekelo:
Ixabiso elongezwe kancinci: iya kuba yezo mpahla kunye / okanye iinkonzo apho utshintsho olwenzekayo lincinci kwaye akukho nto ingako yokujongana nayo. Ukuba yinto engabalulekanga, ixabiso elongeziweyo eliyifumanayo liphantsi. Uya kwenza inzuzo encinci.
Phakathi: zezi mveliso apho kuthathwa khona inkqubo ebanzi yokuziguqula, kodwa oko akufuneki kutyalo-mali olukhulu.
Ixabiso elongezelelekileyo: kuxa ezi zinto okanye iinkonzo zingena kutshintsho olupheleleyo, kusetyenziswa ulwazi oluphambili kunye nobuchule obunika ixabiso elingaphezulu.
Ngokwenyani nayiphi na imveliso inokungena kulo naluphi na udidi. Umzekelo, isikipa.
Iya kuba yexabiso elongeziweyo ukuba ubeka umyalezo odibeneyo kuyo. Ngexabiso eliphakathi ukuba, umzekelo, uyayibopha ngedayi yedayi enobume boqobo nobunomdla. Kwaye kuya kuba nexabiso eliphezulu ukuba ungongeza neerhinestones kunye nenkqubo yetekhnoloji apho imibala yehempe ngokwayo ihambela kwisigqi somculo.
Ukongeza, kuya kufuneka uyazi ukuba ayisiyiyo kuphela into yeempahla kunye neenkonzo. Unokuba yinxalenye yabantu, iinkampani ... Makhe siyibone ngokulandelayo.
Ixabiso elongeziweyo lenkampani
Kwimeko yenkampani, Ixabiso elongeziweyo linokulingana ngokufanelekileyo nezibonelelo ozifumanayo. Oko kukuthi, umahluko phakathi kwengeniso kunye nenkcitho, kuba oko kubangelwe ngumsebenzi olungileyo owenzayo.
Ewe ixabiso elongeziweyo linokubonelelwa nangokuphuculwa komsebenzi, kubudlelwane phakathi kwabasebenzi nabaqeshi ...
Ixabiso elongeziweyo lomntu
Khawufane ucinge umntu. Le ayina zifundo kwaye isebenza kwinto abayifundisiweyo, kodwa ngaphandle kokunye. Ngoku, cinga loo mntu ngaphandle kwezifundo. Usebenza ngendlela afundiswe ngayo, kodwa efaka inkanuko kwaye efumana iziphumo abanye abangakwaziyo. Ngaba zombini zongeze ixabiso okanye yesibini kuphela?
Ngokwenyani, zombini zongeze ixabiso, kodwa eyesibini inezinto ezingaphezulu kweyokuqala.
Ngokubanzi, ixabiso elongeziweyo labantu libhekisa kwezi zifundo, ulwazi, uqeqesho ... Kunye namava, ukwazi, izakhono, amandla ...
Ungayifumana njani kwiinkampani
Ukufumana ixabiso elongeziweyo kwiinkampani akuyona into enokuthi ibonakale ngamehlo. Nangona kunjalo, inokwenzeka. Ukuze wenze oku, kuyimfuneko ukuseka iprofayili yomthengi ukufumana ukuba bathanda ntoni, zithini iimfuno zabo, bafuna ntoni ...
Nje ukuba intengiso yenzeke, inqanaba lokwoneliseka kufuneka liphinde lijongwe; Oko kukuthi, ukuba wonwabile, ukuba unokuphucula into, njl.
Ewe iinkampani azinakufumana kuphela ixabiso elongeziweyo kwiimveliso kunye / okanye iinkonzo, kodwa oku kungafunyanwa nakubantu abasebenza apho ngokwabo, abanokuthi babe negalelo kwenye into kwishishini kwaye baliphucule.
Nangona kuhlala kusithiwa yonke into sele iqulunqiwe kwaye kunzima kakhulu ukunika abasebenzisi into engcono okanye into eyahlukileyo ngokupheleleyo, isenokuphunyezwa.
Kwimeko phucula ixabiso elongeziweyo asizukukuxelela ukuba kuya kuba lula, kude nayo. Kodwa uneendlela ezininzi:
Ukunikezela ngento ekungekho mntu ubonelelayo. Inokuba yinto ebonakalayo, into engaphathekiyo, isaphulelo esikhethekileyo, imveliso okanye inkonzo egoba ukugoba kwezinto ezinikezelwa ngabanye ...
Yongeza eyongezelelweyo. Oko kukuthi, beka enye into kuyo ephucula umgangatho wayo. Inokukhawuleza ...
Ludlule ulindelo lwabathengi. Oku yeyona ilula. Khawucinge ukuba bakucela imveliso. Kwaye uthumela umyalezo wokubulela, ukongeza kwinto eqhelekileyo ngesiqinisekiso sokuthenga, i-invoyisi kunye nabanye. Emva koko, ulungiselela ukuthunyelwa kwaye ukwenze kube ngokwakho. Xa uyifumana, ulindelo lwakho, xa kuthelekiswa nezinye izinto ozithengayo kwi-Intanethi, ziya kugqithiswa, kwaye oko kuyakwenza uzive ubalulekile kuwe. Thenga kwakhona ukuba ithuba livela.
Kule meko, itekhnoloji kunye neenkcukacha zinokuba sisitshixo sokuphucula kunye nokunika ixabiso elongeziweyo. Ukunxibelelana ngakumbi nomthengi wakho, ukukhululeka kwabo ukuba bathenge kuwe, ukukhawuleza okanye ukwenza ubuqu ngamanqaku ahlukeneyo apho ujonge khona ukonyusa elo xabiso.
Imveliso okanye inkonzo ibalulekile xa isebenza ukwanelisa umnqweno womthengi okanye isidingo sakhe. Koko kukuthi, inexabiso ukuba abantu bayayifuna. Ke ngoko, izinto ekumiselwe kulo eli xabiso zezi:
Amandla okwanelisa loo mnqweno okanye ibango.
Konke oku kuseti eyinxalenye yento elungileyo okanye inkonzo kwaye ukuyinika ngexabiso elingaphezulu okanye elincinci elongeziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ixabiso longeziwe